Istuudiyaha wanaagsan ee Tattoo: tabaha lagu xusho | Tattoo
Istuudiyaha Tattoo wanaagsan: talooyin ku saabsan xulashadiisa
Waa macquul in, haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad u socoto si aad u hesho tattoo ah, waxaad isweydiisaa naftaada waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu doorto a wanaagsan istuudiyo istuudiyaha. Jaleecada hore, waxay umuuqataa in kaliya lagala tashanayo shabakadaha bulshada waa inaan helnaa wax nagu filan, laakiin waxaan si qoto dheer u guda gali doonnaa arrinta, maadaama ay tahay go'aan muhiim ah oo aan ku xirnaan doonin oo keliya hal arrin.
Marka bal aan fiirino wax yar consejos ku saabsan sida loo doorto a istuudiyaha fiican.
1 Go'aanso waxa aad rabto
2 Ka hubi shabakadaha bulshada iyo fikradaha internetka iyo dadka dhabta ah
3 Yaan lagaa hagin qiimaha oo keliya: dooro tayo iyo nadaafad
Go'aanso waxa aad rabto
Waxay umuuqataa doqon, laakiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso go'aanso markaad dooraneyso a istuudiyaha fiican waa in la go'aansado nooca tattoo aad rabto Sida iska cad, xaqiiqdii wax fudud ayaa lagu qaban doonaa meel kasta, laakiin haddii aad rabto a naqshadeynta wax si gaar ah u qeexan ama a qaabka gaar ahaan (dhaqameed, majaajillo, waaqic ...) waxaa lagugula talinayaa inaad adigu u sheegtid naftaada fanaaniinta ama istuudiyaha ku takhasusay nooca tattoo Maxaad rabtaa si natiijada ugu dambaysa ay u noqoto, haddii ay suurtagal tahay, in ka badan cajiib ah.
Ka hubi shabakadaha bulshada iyo fikradaha internetka iyo dadka dhabta ah
Markaad doorato tattoo, ka eeg internetka daraasado suurto gal ah ama fanaaniinta deegaankaaga. Hubi fikradaha isticmaalaha oo arag sawirrada ku dhagan iyaga shabakadaha bulshada inaad dhammeyso go'aan ka gaarista haddii taasi ay tahay waxa aad raadineyso iyo in kale. Sidoo kale, markaa waad hubin kartaa inta waqtiga firfircoon qaadataa daraasadda (dheer, khibrad badan).
Ikhtiyaar kale ayaa ah in la doorto waa istuudiyo istuudiyaha iyada oo ku saleysan aragtida qof "dhab ah". Marka waad awoodaa inaad weydiiso shakigaaga koowaad gacantaada, arag shaqo oo ogow inay u qalanto iyo in kale. Tusaale ahaan, Tatookeygii ugu dambeeyay waxaa lagu sameeyay a istuudiyo istuudiyaha in aanan ogeyn, laakiin aan anigu ayay ku taliyeen. Waan hubiyey shabakadaha bulshada inaan ka helay qaabka iyo inay iyagu leeyihiin fikrado wanaagsan oo wanaagsan oo aanan ku farxi karin natiijada.
Yaan lagaa hagin qiimaha oo keliya: dooro tayo iyo nadaafad
Ugu dambeyntii, ha u oggolaan qiimaha ku hago: ha loo daayo tayada iyo nadaafada. Tattoos waa wax caro maxaa yeelay halkaas ayey wada joogi doonaan nolosha waxayna ubaahanyihiin warbaahin qaali ah iyo ilo sida khad iyo wanaag nadaafadda. Marka dooro a istuudiyo istuudiyaha ka dhig mid nadiif ah oo lagu kalsoonaan karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Istuudiyaha Tattoo wanaagsan: talooyin ku saabsan xulashadiisa
Tattoo wadnaha gacanta, ururinta fikradaha iyo naqshadaha
Tattoo-yada caanka ah - kuwee ayaa ugu caansan barta Instagram?